How'd it happen and more reports?: ဘယ်ဘာသာဝင်တွေမှာ ပိုသောင်းကျန်းကျလဲ!
မူဆလင်တွေ ရာဂကိစ္စနှင့် လောင်းကစားမှာရော တော်တော်များပြား သောင်းကျန်းတာဘဲ၊ ဒါတောင် သောကြာနေ့တိုင်း ဘုရားဝတ်ပြုနေကျပြီး သူတို့ လူမျိုးပွားများဖို့ တောက်လျှောက် အားပေးဟောပြောနေ တာ နှင့်တူတယ်၊ အသက်ငယ်ငယ်နှင့် အိမ်ထောင်ပြုကျတာ ဒီမူဆလင်ပိုများတယ်နော်၊ ငယ်ရွယ်နုနုထွက်ထွက်တွေကို ပိုကြိုက်ကျတယ်၊ တချို့ဆို အရွယ်တောင်မရောက်ကျသေးဘူး ရောင်းစားခံ လင်ပေးစားခံနေရပြီ၊
ဗုဒ္ဓဘာသာတွေထက် တစ်ဆ လောက်ကို ပိုများတယ်နော်၊ နိုင်ငံလူမျိုး တခုလုံးကို မြိုသွား နိုင်တယ်.....
စကာင်္ပူက စာတွေ့အရ အချိုးအစားအတော်များနေတာက မူဆလင်တွေဖြစ်နေတယ်...
Posted by Ko Nge at Monday, September 22, 2014